अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो कोड जिरो २ र २ जिरो के हो ? पाइलट र कन्ट्रोल रुमबीच जुन सम्वाद हुंदाहुंदै दुर्घटना भयो ! « Dhankuta Khabar
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो कोड जिरो २ र २ जिरो के हो ? पाइलट र कन्ट्रोल रुमबीच जुन सम्वाद हुंदाहुंदै दुर्घटना भयो !
प्रकाशित मिति : Mar 13, 2018
समय : 4:17 AM
काठमाडौ – सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएको यूएस बंगला विमानका पाइलट र कन्ट्रोल रुमबीच भएको सम्वाद सार्वजनिक भएको छ ।
संवादमा जिरो २ र २ जिरोमध्ये कुन ठाउँबाट विमान अवतरण गर्ने भन्नेबारे लामो बहस सुन्न सकिन्छ । कन्ट्रोल रुमले २ जिरोबाट अवतरण गर्न भनेपनि पाइलटले २ जिरोमै अवतरण गराउँछु भनेपछि अन्त्यमा कन्ट्रोल रुमले अनुमति दिन्छ । तर अवतरणलगत्तै विमान दुर्घटना हुन पुग्छ ।
विमानस्थलको जिरो २ र २ जिरो भनेको के हो त ? विमानस्थल कार्यालयका अनुसार उत्तरतर्फबाट अवतरण हुने ठाउँ २ जिरो र दक्षिणतर्फबाट अवतरण हुने ठाउँ जिरो २ हो ।
विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दक्षिणतर्फ अर्थात कोटेश्वर क्षेत्रबाट विमान अवतरण गर्ने गर्छन् । कहिलेकाहीँ उत्तरतर्फ अर्थात पशुपति क्षेत्रबाट पनि विमान अवतरण गराइन्छ । उडान पनि यसैगरी हुन्छ । धेरैजसो उडान दक्षिणतिरबाट र कम उडान उत्तरतर्फबाट पनि हुने गर्छ ।
उत्तरतर्फ या २ जिरोको तुलनामा दक्षिणतर्फ या जिरो २ बाट उडान र अवतरण सजिलो हुने विमान चालकहरु बताउँछन् । कन्ट्रोल रुमले पनि दक्षिणतर्फ या जिरो २ बाटै अवतरण गर्न सुझाउँछन् ।
सोमबार दुर्घटनामा परेको जहाजका पाइलटलाई पनि कन्ट्रोल रुमले दक्षिणतर्फ अर्थात जिरो २ बाट अवतरण गर्न भनेको थियो । तर पाइलटले २ जिरोबाटै अवतरण गर्न खोजे ।
पाइलट अलमलमा परेकोबारे कन्ट्रोल रुमका कर्मचारी पहिल्यै जानकारीमा रहेको संवादबाट बुझिन्छ । पाइलटले २ जिरोबाटै अवतरण गर्ने भनेपछि अन्त्यमा कन्ट्रोल रुमले स्वीकृति दियो । तर दुःखको कुरा जिरो २ को सट्टा २ जिरोबाट अवतरण गरेकै कारण विमान दुर्घटनामा पर्यो ।-उज्यालो अनलाइनबाट
श्रीलंकामा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध
अब नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह,सन् २०१९ को अगस्टमा अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट प्रक्षेपण गर्ने
स्मार्टफोनको लत छुटाउन यसरी २६ लाख रुपैयाँ खर्च!
धान सुपरजोनमा सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट सिँचाइ गर्न थालियो
यी चेपाङ युवाको जहाज उडाउने सपना, जहाजमा अब इन्जिन राख्न मात्र बाँकी